China Vana Vanoshandisa Ruoko Sanitizer TECH-BIO fekitori uye vagadziri | Zhongrong
Iine anopfuura makore makumi maviri ezviitiko tarisa pane disinfection indasitiri
Pasi pesimba recovid-19, Ruoko Sanitizer inova yedu yekuchengetwa inodikanwa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva kunyanya mune dzimwe nzvimbo dzeruzhinji senge chikoro, chipatara, supamaketi, hotera, nezvimwewo Ichi chigadzirwa chine 75% yedoro inogona kuuraya coronavirus nemamwe utachiona kuchengetedza hutano hwedu zvakanyanya. 30ml kurongedza yakanyatsogadzirirwa vana kushandisa uye inogona kumhanya mukati ingangoita hafu yemwedzi, saka ine hutano kune vana.Tinogona kugadzirisa iyo pack nekuda kweakasiyana vatengi zvinodiwa. Sezvo isu tinogadzira mbishi mbichana doro, mutengo wedu unokwikwidza nemhando yepamusoro. Kunze kwezvo, isu tapfuura CE, FDA, uye ISO ongororo. Isu tinotanga brandTECH-BIO kuiita seNo.1 brand yeiyo disinfection muChina sezvo isu tine mhando yepamusoro yedoro muChina. Isu tiri mutungamiri muChina kune ethanol tekinoroji. Tine dzinosvika mazana mashanu emazana emamirimita mita yemusangano nzvimbo munzvimbo yeHebei, China. Kambani yedu yakavambwa muna 1999. Zvisinei, isu tinogona zvakare kugamuchira OEM & ODM yemarudzi ese emaoko sanitizer. Kutarisira mberi kuve wako wepasi rose mudiwa uye kuzadzisa kuhwina-kuhwina mamiriro!
Iremekedzwa semumwe wemabhizinesi eChina High-Tech, ZhongRong Technology Corporation Ltd. (kodhi yemasheya: 836455) iri nyanzvi muminda yeBiochemical, Pharmaceutical Chemicals, Fine Chemicals uye New Energy. Zvichienderana nebasa "kusimudzira nzanga kufambira mberi nekuenderera mberi kwekuvandudza", kambani inoisa pfungwa paR & D, kugadzirwa uye kushambadzira kweethanol uye makomo ayo ekumusoro nekudzika kwezvigadzirwa anopfuura makore makumi maviri, uye inozvipira mukuva mukwikwidzi anonyanya kukwikwidza kune asiri-zviyo ethanol.
Net Vhoriyamu: 30ml
Zvakanakira: Doro Rakavakirwa · Zvakachengeteka Zvakatipoteredza · Triclosan Mahara · Hutano
Use: Kubatsira kubvisa mabhakitiriya paganda anogona kukonzera chirwere uye kunyorovesa ganda.
Dhairekita: Isa chidiki paruoko wopuruzira kusvika waoma.
Yambiro: Zvekushandisa zvekunze chete · Zvinotakurika · Gara kure nekupisa uye murazvo ∙ Dzivisa kusangana nemaziso uye rakatyoka ganda.
Isingashandisi Zvinongedzo: Yakanatswa Mvura, Carbopol, Isopropyl Doro, Triethanolamine
Rumwe Ruzivo: Inochengetwa munzvimbo yakaoma ine chisimbiso.
Rudzi urwu rwemaoko sanitizer rwakakodzera vana sezvo pasina hwema mune yekubika. Hapana zvinhu zvinokuvadza uye zvine chepfu kuvana. Iyo yepurasitiki bhodhoro pack ndeyemhando yepamusoro uye haisi nyore kuputswa. Iyo 30ml vhoriyamu inotakurika uye iri nyore kushandisa chero kupi kana iwe ukasvibisa hutachiona hwevana. Ichave sarudzo yako chaiyo kuchengetedza hutano hwevana kure nehutachiona hwakajairika uye covid-19. Tinogona zvakare kugadzira OEM & ODM kugadzirisa akasiyana vhoriyamu uye kurongedza dhizaini neyemutengi wega logo.
Pashure: 50ml Ruoko Sanitizer Gel TECH-BIO